သြစတေးလျနိုင်ငံတွင် စာသင်ခန်းတစ်ခုအတွင်းသို့ ကားတစ်စင်း ဝင်တိုက်မှုကြောင်း ကလေးငယ်နှစ်ဦ?? - Yangon Media Group
သြစတေးလျနိုင်ငံတွင် စာသင်ခန်းတစ်ခုအတွင်းသို့ ကားတစ်စင်း ဝင်တိုက်မှုကြောင်း ကလေးငယ်နှစ်ဦ??
ဆစ်ဒနီ နိုဝင်ဘာ ၇ ၊ သြစတေးလျနိုင်ငံ၊ ဆစ်ဒနေမြို့ရှိ ကျောင်းတစ်ခုတွင် စာသင်ခန်း တစ်ခုကို ကားတစ်စင်းက အင်္ဂါနေ့တွင် ဝင်တိုက် ခဲ့ပြီးနောက် ယောကျာ်းလေးနှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း၊ အရေးပေါ်ကူ ညီပေးရေးအဖွဲ့များ ရောက်ရှိလာချိန်တွင် ဝရုန်းသုန်းကားအခြေအနေနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်း သတင်းများတွင် ဖော်ပြသည်။
ယင်း စိတ်မကောင်းဖွယ်ရာ ကားတိုက်မှုသည် Banksia Road Public ကျောင်းရှိ သစ်သားဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော စာသင်ခန်း တစ်ခုတွင် စာသင်ချိန်စတင်ပြီး မကြာမီပင် ယင်းမော်တော်ယာဉ်က ဝင်တိုက်ခဲ့ရာမှ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နယူးဆောက်ဝေးလ်ပြည်နယ် လက်ထောက်ကော်မရှင် နာမင်းကြီး စတီးဝပ် စမစ်က “အဲဒီ မော်တော်ယာဉ်ဟာ အဆောက်အဦးထဲကို ဝင်သွားပြီးတော့ စိတ်မကောင်းစွာဘဲ ယောကျာ်းလေး နှစ်ဦးသေ ဆုံးခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ သိရှိခဲ့ရပါတယ်၊ ဒီယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ကလေးငယ် ငါးဦးကို Westmead ဆေးရုံသို့ အလျင်အမြန်ပဲ ပို့ဆောင်လိုက်ရပါတယ်၊ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ အဲဒီယောကျာ်းလေး ငါးဦးထဲက နှစ်ဦးက သေဆုံးသွားခဲ့တာပါ” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
သေဆုံးသူ ကလေးငယ်နှစ်ဦးဟာ အသက် ၈ နှစ်အရွယ်ရှိကြ သည်ဟုဆိုသည်။ အခြားကလေးငယ် ၁၈ ဦးမှာလည်း အသေးစား ထိခိုက်ဒဏ်ရာများကြောင့် အခင်းဖြစ်ရာနေရာတွင် ကုသပေးခဲ့ရသည်။ အသက် ၅၂ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး ယာဉ်မောင်းကို စစ်ဆေးမေးမြန်းနေပြီး အရက်နှင့် မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲခြင်းရှိ၊ မရှိစစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
လက်ထောက်ကော်မရှင်မနာမင်းကြီး စမစ်က “ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီဟာကို ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်တဲ့ လုပ်ရပ်အဖြစ် သတ်မှတ်မှာမ ဟုတ် ပါဘူး၊ ဒါဟာ ယာဉ်တိုက်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
နယူးဆောက်ဝေးပြည်နယ် လူနာတင်ယာဉ် ကြီးကြပ်ရေးမှူး စတက်ဖနီ ရတ်နီဒတ်က လူသေဆုံးမှုရှိခဲ့တဲ့ အခင်းဖြစ်ရာနေရာ ကို ဆေး ဝန် ထမ်းတွေ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
၄င်းက ” ဆိုးရွားတဲ့ မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရာနေရာမှာ ဒုက္ခရောက်နေပြီး စိတ်ထိခိုက်နေတဲ့ ကလေးငယ်နဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတော်တော်များများ ရှိနေခဲ့ပါတယ်၊ ဝရုန်းသုန်းကား အခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် တရားမဝင်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတင်သွင်းလာသည်ဟု သံသယရှိသူ ၃၉ ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့
ခွန်တန်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး အလံတရာနယ်မြေတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဟု တိုင်ကြားသူများဆို